Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: orana mampisara-taona | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: orana mampisara-taona
Nirotsaka ny orana. Nirefotra ny kotroka na tsy mbola nilatsaka aza ny tena oram-baratra. Mety hitohy andro vitsivitsy izany, nefa ahiana ny fandimbin’ny fotoana main-tany azy. Ny orana latsaka moa dia voalaza fa hahamaitso ny ahitra, kanefa fomba fiteny fotsiny izany. Iny hamandoana iny dia fitaka fotsiny, mahatonga ny zava-maitso hitsimoka ary hitolefika haingana noho ny famainan’ny tany sy ny danik’andro. Hafakely anefa tamin’ity taona ity ny fotoan’ny hatsiaka. Tsy tafakatra firy ny maripana, izany angamba no fisehon’ny fiovan’ny toetr’andro, izay ampiomanana ny rehetra.
Ny tsy misy fiovana dia ny fidangan’ny vidim-piainana, mifanandrify amin’ny fotoan’ny maitso ahitra. Eo moa ny fiantraikan’ny onjan’ny tsena any ivelany izay tsy hain’ny mpitondra ny miaro ny mponina amin’ny herisetran’izany. Anton’izany angamba ny tsy fahampian’ny ezaka ahafahana hahaleo tena noho ny fahampian’ny vokatra eto an-toerana. Na ny vary foto-tsakafo aza dia mbola misy afarana any ivelany ahafahana miatrika ny filàn’ny mponina. Ny hena moa dia fantatra fa noho ny fihenana an-toeran’ny isan’ny omby dia midangana ny vidiny ho an’ny mpanjifa, ary etsy andaniny dia tsy maharaka ny filàna koa ny fiompiana kisoa.
Amin’ny fotoan-tsarotra dinganina isan-taona toy izao dia mivangongo ny vokatra mikasika ny tsy fahombiazan’ny pôlitika fitantanana ny sehatra isan-karazany, na fambolena, na fiompiana, na fitsinjovana ny mponina, na fanjariana ny varotra… Fotoana firesahana pôlitika tsy misy toy izao ao anatin’ny fampielezan-kevitra mialoha ny fifidianana izao. Tsy atao ankamantatra fotsiny anefa izany fampielezan-kevitra izany fa lasa fanaovan’ireo mpifaninana tolotra tsy mifanentana amin’ny mahamaika ny mponina raha toa tsy mihaino ny hetahetan’ny vahoaka ireo manolotra vahaolana.
Maro ny tetika aroson’ireo mpilatsaka ho fidiana. Misy maha-te hidera mihitsy ny fahatsaràn’ny fandrafetana azy. Mampanontany tena ihany anefa hoe hamirapiratra toy ny fonosany ve ny ao anatiny rahefa tena hampiharina ? Matetika hatramin’izay dia tsara ny tetika fa eo amin’ny fanatanterahana vao mandamoka! Tsy ny olona no tsy ampy. Tsy ny manapahaizana no tsy misy. Noho izany, na ny fitaovana no tsizarizary, na ny toe-tsaina no tsy mifanentana amin’ny andraikitra. Anisan’ny fahendrena sy fahaizana irin’ny maro mba hananan’ny Filoha ny fahaizany mifantina ny olona izay atokisany ary fantany fa sady manam-panahy no manam-pahaizana.